Claudio Marchisio oo aad ugu dhow inuu xaqiijiyo ka tagista kooxda Juventus – Gool FM
Claudio Marchisio oo aad ugu dhow inuu xaqiijiyo ka tagista kooxda Juventus
(Juventus) 12 Luulyo 2018. Claudio Marchisio ayaa qarka u saaran inuu xaqiijiyo ka tagistiisa kooxda Juventus kadib markii uu arintan kala heshiiyay maamulka Bianconeri.
Sida uu shaac ka qaaday “CalcioMercato” Claudio Marchisio ayaa go’aansan doono u dhaqaaqista horyaalka Chinese Super League, wuxuuna doonayaa inuu dhageysto dalabyada kala duwan uu ka helayo.
Claudio Marchisio ayaa ilaa iyo haatan kula jira kooxda Juventus heshiis gaaraya ilaa iyo 2020, laakiin xili ciyaareedkii lasoo dhaafay wuxuu la kulmay dhaawacyo isdaba joog ah, balse haatan wuxuu kasoo kabtay dhaawacii uu ka qabay dhanka jilibka.
Shabakada Sky Sports ayaa shaacisay in Claudio Marchisio iyo kooxda Juventus ay isku af garteen in la afjaro heshiiska laacibka, sidoo kale xidiga reer Talyaani ayaa ka fariisanaya dalab kaga yimid kooxda reer France ee Monaco.
WAR CUSUB: Marcelo oo Cristiano Ronaldo kula biiri kara kooxda Juventus!!
Kadib Ronaldo, waa kuma laacibka labaad ee ka tagi doona Real Madrid?